IBungalows ziyathengiswa eLooe, eCornwall
Indawo yokulala edibanisa indawo yokulala encinci enokuthi ifumane isibonelelo ngokuhlaziya, ibekwe kwindawo ethe cwaka-kwindawo yokuphumla edolophini kwaye ikwafumaneka kungekho ndawo eqhubekayo.Izotyelelo ezihambelanayo: - Indawo yokungena encinci igumbi lokuhlala, ikhitshi, indawo yokugcina izinto, iibhedi ezintathu ...
Ngokombono wethu lo mxokelelwane wasimahla weholide yokulala unokwenza indawo efanelekileyo yokuhamba elwandle kunye nendawo yokuhlala enesisa yokubandakanya; Indawo yokulala / indawo yokutyela, ikhitshi efanelekileyo, igumbi lokulala ezimbini ezahlukeneyo kunye igumbi losapho. Konke oku kufikeleleka ngokulula ukusuka kwinqanaba lepaki yeendawo ezihlanganayo ngokufutshane nje ...
Igumbi lokulala ezimbini elichongiweyo elikummandla othandwayo weNtshona Looe kwaye linemimandla yasemaphandleni kunye nembono zolwandle ezikude. Le ndawo ibonelela ngokuhlala ngokukhululekileyo kuwo onke amagumbi okubonelela ngesisa, kubandakanya nokongezwa kwendawo yokugcina izinto ngombono kwigadi yangasese yangasemva nangaphandle elwandle. I ...
Ibala lokulala elincinci elilingwe kwindawo yesithili edumileyo yendawo ekuthiwa ziiWidegates. Ipropathi inika igadi yolondolozo ephantsi, indawo yokugcina ingekho phantsi kwepropathi, igaraji kunye nokupakisha izithuthi ezininzi. Ezinye izibonelelo zibandakanya ukujonga kabini ukutyibilikisa ioyile kunye nokufudumeza okuphakathi okuphakathi. I-UPVC kabini g ...
IBungalow efunyenwe kwindawo efuna indawo enkulu. Ukunikezela ngendawo yokuhlala enobuqhophololo, oku kuncitshiswa zizibonelelo ze-UPVC zokufudumeza kabini ngombala wegesi ngaphakathi. Ipropathi inendawo yokupaka izithuthi kwinqanaba lendlela kunye nesitiya esifihliweyo, esingumyezo esise ngasemva esonwabela kude ...